Somaliland oo diiday diyaarad siday dhalinyaro in ay ku degto garoonka Hargeysa… – Hagaag.com
Somaliland oo diiday diyaarad siday dhalinyaro in ay ku degto garoonka Hargeysa…
Posted on 3 Juunyo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Maamulka Somaliland ayaa maalintii shalay u diiday in magaalada Hargeysa ay soo caga-dhigato diyaarad sitay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee laga keenay dalka Libiya, kuwaasoo ka soo jeeda deegaanada Somaliland.
Diyaaraddan oo ka baxday magaalada Muqdisho ayaa markii Hawada Somaliland gashay lagu amray inay dib u laabato, taasoo qasab ku noqotay in diyaaradaas ka degto magaalada Garowe.
Dhalinayaradan oo ka soo jeeda Somaliland ayaa gaarayay kontameeyo ruux, kuwaasoo ka mid ahaa illaa 151 dhalinyaro oo maalmo ka hor ka degay magaalada Muqdisho, kaddib markii diyaarad lagaga soo qaaday dalka Libiya oo ay in muddo ah ku xanibnaayeen.
Maareeyaha Hey’adda Duulimaadka Somaliland iyo Maamulka Garoonka Cigaal Air Port ayaa diiday in diyaaradan ay soo caga dhigato garoonka diyaaradaha Hargeysa, halkaasoo ay diyaar ku ahaayeen ehelada dhalinyaradaas.
Duuliyaha diyaaradda ayaa markii lagu wargeliyay in aanu soo caga dhigan karin garoonka Hargeysa ku dooday in aanu heysan shidaal ku filan oo uu diyaaradda dib ugu celiyo Muqdisho, taasna ay ku kaliftay in diyaaradda uu ka dejiyo Garowe.
Lama oga sababta ka dambeysay tallaabada ay qaaday Somaliland oo ay ugu diiday inay soo caga-dhigato diyaaradda waxaana arrintan ka carooday ehelada dhalinyarada saarnaa diyaaradda oo muddo aysan arag wiilashooda
Dhalinyaradii shalay ka degay Garoowe ayaa si wanaagsan loola dhaqmay, isla markaana loo sameeyay soo dhaweyn waxaana la dareensiiyay in Garoowe ay tahay magaalo Soomaaliyed aysana jirin cid ka xigta.